how to format my memory stick
ကၽြန္ေတာ့ memory stick က format ခ်လို့မရေတာ့ဘူး ဘယ္လိုလုပ္မလဲကူညီၾကပါအံုး
format ခ်ရင္ complete မၿဖစ္ဘူးလို့ၿပေနတယ္ဗ်
ကူညီေပးၾကပ Added by lianpi on March 31, 2011 at 5:00pm —
The Unicode® Standard: A Technical Introduction Note:
As I am trying to understand Unicode, I found this article is very helpful.
So, I would like to share it with you all here...
http://www.unicode.org/standard/principles.html Added by simon on March 31, 2011 at 12:32am —
Jython : Another cat by Java way
ပြီး​ခဲ့​သော​အခန်း​တွင် Jython ဖြင့်၊ shell ကွန်​မန်း cat ကို​ရေးသား​ခဲ့​ပါ​သည်။ Python ၏ မူ​ပိုင် Lib မှ​လုပ်ဆောင်​ချက်​များ​ကို​အသုံးပြု​၍ ရေးသား​ခဲ့​ခြင်း​ဖြစ်​သည်။ JVM ပေါ်​တွင်​အလုပ်​လုပ်​ကြောင့်၊ Java ပိုင် Class များ​ဖြင့်၊ Api များ​ကို​လည်း အသုံးပြု​နိုင်​ပေ​လိမ့်​မည်။
ဦးစွာ Java ဖြင့် cat ကို ရေးသား​ကြည့်​သော​အခါ ဘယ်​လို​ရေး​ရ​မည်​နည်း။ ရေး​ကြည့်​ပါ​ဦး​မည်။
import java.io.BufferedReader;import java.io.FileInputStream;import… Continue
Added by Min Lwin on March 30, 2011 at 9:00pm —
No Comments How to change your AMD Radeon HD 6950 to Radeon HD 6970...!
For the detail information, please visit to the following link...…
Added by Thiha Oo on March 30, 2011 at 9:20am —
Jython : First Step Jython (cat)
Jython ၏ ထူးခြား​ချက်​များ
Jython ၏ လုပ်ဆောင်​ချက်​ကို ရေး​ကြည့်​ပါ​မည်။
# Hello Definationdef sayHello(name):    print("Hello!! " + name)sayHello("Min Lwin")
အထက်ပါ ကုဒ်​များ​ကို Text Editorတစ်​ခု​ကို အသုံးပြု​ရေးသား​ပြီး၊ hello.py အမည်​ဖြင့် သိမ်းထား​ပါ​မည်။ တ​ဖန်​အလုပ်​လုပ်​ခိုင်​ကြည့်​ပါ​က အောက်​ပါ​အတိုင်း​အလုပ်​လုပ် သည်​ကို တွေ့​မြင်​ရ​ပေ​မည်။ Jython တွင် လုပ်ဆောင်​ချက်​များ​ကို def name(argument): ဟု​ရေးသား​ပေ​သည်။ Java… Continue
Added by Min Lwin on March 27, 2011 at 9:00am —
Jython : Hello Jython
JVM ပေါ်​မှာ​အလုပ်​လုပ်​နိုင်​တဲ့ Script ဘာသာ​ရပ်​တစ်​မျိုး
Python ဘာသာ​ရပ်​၏ အမျိုး​ပွား​ပ​ရို​ဂ​ရမ်​မင်း​ဘာသာ​ရပ်​တစ်​မျိုး
Jython ၏​အတွင်း​ပိုင်း လုပ်ဆောင်​ချက်​များ​သည် Java ဖြင့်​ရေးသား​ထား​သည်
Jython ကို အသုံးပြု​ခြင်း​အား​ဖြင့်
Java နဲ့​မ​တူ​ပဲ ကွန်​ပိုင်း​လုပ်​စရာ​မ​လို​ဘူး
ရိုး​ရှင်း​တဲ့ OOP ကို အခြေ​ခံထား​ပါ​သ​ဖြင့်၊ လော့​ဂျစ်​တစ်​ခု​ကို Java နဲ့​ယှဉ်​ပြီး ရေး​ကြည့်​ပါ​က…
Added by Min Lwin on March 26, 2011 at 3:30pm —
Java SE7 : Project Coin 3
Java SE7အခန်းဆက်အနေ​နဲ့ Project Coin ရဲ့ ပြောင်း​လည်း​မှု့​များ​ကို ပြီး​ခဲ့​တဲ့ အခန်း​၂​ခန်း​ဖြင့်​ရေးသား​ခဲ့​ပါ​သည်။ အစ​ကတော့ အခန်း​၂​မှာ​တင် Project Coin ကို အဆုံးသတ်​ရန်​စီစဉ်​ထားခဲ့​ပါ​သည်။ သို့ရာတွင် ဆင်ပြောင်​ကြီး အမြီး​ရောက်​မှ​တစ်​ဆို​သ​လို နောက်ဆုံး​ပြောင်း​လည်း​မှု့​ဖြစ်​တဲ့ Simplified varargs method invocation ရောက်​မှ အခက်​တွေ့​နေ​ခဲ့​ပါ​သည်။… Continue
Added by Min Lwin on March 26, 2011 at 10:38am —
No Comments AES (Advanced Encryption Standard) အကြောင်း သိကောင်းစရာများ
Derived from Square
Successors Anubis, Grand Cru
Certification AES winner, CRYPTREC, NESSIE, NSA
Key sizes 128,192 or 256 bits
Structure Substitution-permutation network
Rounds 10, 12 or 14… Continue
Added by bluephoenix on March 24, 2011 at 3:30pm —
No Comments KeyMagic 1.4 Released
KeyMagic 1.4 has been released. A new feature is that could show icon of keyboard layout in menu bar and in tray.
There is alsoanew release of kEditor. Now you can filter Glyph by name. By typing "Myanmar" in filter box, there would be only glyph name containing "Myanmar" will be showed. Or you can filter… Continue
Added by ttkz on March 24, 2011 at 1:00am —
MUSIC - links
Okay , this here place is solely for music lovers. Here, I would be posting links to pages where you can download mp3 musics for free.
I'm short of links at the moment, so there is onlyafew of them.
Feel free to contribute/add your own links by commenting the links.
Added by Haroon1992 on March 22, 2011 at 5:09pm —
လိုအပ်ချက်များ4GB flash drive Windows7DVD (Any version as you like) Diskpart.exe utility (download DiskPart here)ဒါတွေပြည့်စုံရင်တော့ စတင် Install… Continue
Added by Kyaw Swa Htoon on March 22, 2011 at 1:52am —
No Comments Java ဟင်း​ပေါင်း​တစ်​ခွက် : Java Class ဖိုင်​ကို Decompiler များ​မှ​ကာ​ကွယ်​ခြင်း ၂
ပြီး​ခဲ့​တဲ့ အပါတ်​က င​လျှင်​ဒဏ်​နဲ့ နျူး​က​လီး​ယား​ရန်​ကြောင့် Java ဘ​လောဂ်​ရေးသား​ချင်း​များ​ကို ခေတ္တ​နား​နေ​ခဲ့​ပါ​သည်။ င​လျှင်​သ​တင်း​ကို ရှာဖွေ​ပြီး အချက်​ပေး​တဲ့ Redfeatherကို ရေး​နေ​ခဲ့​ခြင်း​ကြောင့်​လည်း​ပါ​သည်။ Test လုပ်​ရန်​အတွက် င​လျှင်​အလာ​စောင့်​နေ​သော ကိုယ့်​ကို​ကိုယ်​လည်း အတော်​အူ​ကြောင်ကြောင်​နိုင်​ပါ​လား​ဟု တွေး​မိ​ပါ​သည်။ တစ်​ပါတ်​လည်း​ကြာ​ခဲ့​ပါ​ပြီ။ နျူ​က​လီး​ယား​ရန်​က​အေး​ပြီ​လား​ဆို​တော့ မ​သေချာ​သေး​ပေ​မယ့် အထိုက်​အလျှောက်​တော့… Continue
Added by Min Lwin on March 20, 2011 at 4:30pm —
ဂျပန်​မှာ​လက်​ရှိ င​လျှင်​အကြီး​အကျယ်​လှုပ်​သွား​ပါ​တယ်။ လက်​ရှိ​လဲ အနည်း​နဲ့​အများ​တော့ လှုပ်​နေ​တုန်း​ပါ​ပဲ။
ဘာ​တက်​နိုင်​လဲ ဆို​တာ​စဉ်းစား​ကြည့်​တော့ င​လျှင်​လာ​လျှင် အသိ​ပေး​တဲ့ Application တစ်​ခု​ရေး​ပြီး အလကား​ပေး​ဖို့ သတိရ​သွား​တယ်။
အခြေ​ခံ​ကတော့ Japan မိုး​လေ​ဝ​သ ဌာန​က​ထုတ်​ပြန်​တဲ့ င​လျှင်​သ​တင်း​ကို သွား⁠သွား​ဖတ်​ပြီး သတ်​မှတ်ထား​တဲ့ ဒီ​ဂ​ရီ​ကိုကျော်​တဲ့ သ​တင်း​က​ထွက်​လျှင် အသိ​ပေး​တဲ့ Application လေး​တစ်​ခု​ပါ။
ရေး​မှာ​က Java Desktop Application… Continue
Added by Min Lwin on March 15, 2011 at 8:00pm —
ဂျပန်​သမိုင်း​အကြီး​မား​ဆုံး င​လျှင် အဏုမြူ​ဓာတ်​အား​ဆီ​ယို​စိမ့်​မှု့ ပုံ​မှန်​ထက်​၇​၃​စ​များပြား​ကြောင်း
၂​ဝ​၁⁠၁​ခု​နှစ်​၃​လ​ပိုင်း​၁⁠၁​ရက်​နေ့ ဂျပန်​နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်​ပိုင်း​တွင် ဖြစ်ပွား​ခဲ့​သော ဂျပန်​သမိုင်း​အကြီး​မား​ဆုံး င​လျှင်​ကြောင့် ဖု​ကု​ရှိ​မား ပြည်နယ်၊ အဏုမြူ​လျှပ်စစ်​ထုတ်​လုပ်​ရေး​စက်​ရုံ အမှတ်​၁၊ နံပါတ်​၁​ဓာတ်​ပေါင်းဖို အတွင်း​ပိုင်း​တွင် ဖိ​အား​မြင့်​မား​မှု့​များ​ဖြစ်ပွား​လျှက်​ရှိ​ပြီး အဏုမြူ​ယို​စိမ့်​မှု့ အန္တာ​ရယ် အတွက် စိုးရိမ်​ဖွယ်​အန​အေ​ထား​ဖြစ်​၏။ အမှတ်​တစ် စက်​ရုံ​၏ အဝင်​ပေါက်​၌ တိုင်းထွာ​ချက်​အရ ပုံ​မှန်​အန​အေ​ထား​ထက် အဆ​ပေါင်း ၇​၃​စ​များပြား​ကြောင်း… Continue
Added by Min Lwin on March 12, 2011 at 2:00pm —
Wireless LAN အ‌ေကာင်း အဆိုး
Wireless LAN ကို WLAN လိုလည်း အတို‌ေကာက်‌ေခတယ်။ WLAN ဆိုတာက (wireless local area network) ကိုြပန်ပီး အတို ‌ေကာက်သုံးထားတာ။ ကွန်ပျူတာှစ်လုံး သိုမဟုတ် ကွန်ပျူတာ ‌ေပါင်းများစွာကို ကိးမပါဘဲ ချိတ်ဆက်အသုံးြပတဲ့ စနစ်တစ်ခုြဖစ် ပါတယ်။
WLAN က ‌ေရဒီယိုလိင်း (radio waves) ‌ေတွအ‌ေပမှာ အ‌ေြခခံထားပီး spread-spectrum သိုမဟုတ် OFDM modulation နည်းပညာလိုဆိုပါတယ်။ ကန်သတ်ထားတဲ့ ဧရိယာအတွင်းမှာသာ ကားခံပစည်း‌ေတွအသုံးြပပီး… Continue
Added by U Tin Nyunt on March 12, 2011 at 10:57am —
၂။ install ပြီး​သွား​ပေ​မယ့် သူ့​မှာ ဘာ Font မှ​ထည့်​မ​ထား​တာ​ကို တွေ့​ရ​မှာ​ပါ။ အရင်​ဦး​ဆုံး Original Font ကို​ထည့်​ပါ​မယ်။ Original Font ကို Restore… Continue
Added by ranka on March 10, 2011 at 11:30am —
Gtalk တွင် ဘာသာပြန်စနစ် ထည့်သွင်းနည်း နှင့် google service account
အခုဆိုရင် Gtalk မှာ ဘာသာပြန်စနစ် ပါရှိလာပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ရိုက်လိုက်တဲ့စာတွေကို တခြားဘာသာသို့ တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ပေးတဲ့စနစ်ပါ။ Gtalk မှာ အဲဒီလိုရနိုင်ဖို့ Translation Bots တွေ လိုအပ်ပါတယ်။ Bots တွေရဲ့အမည်ကို ဘာသာစကားတိုင်းရဲ့ ကိုယ်စားပြုစကားလုံးနှစ်လုံး (ဥပမာ- English ဆိုရင် EN ) ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ [from language]2[to language]@bot.talk.google.com ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီး ရနိုင်တဲ့ bots တွေရဲ့ အမည်ကို အောက်မှာ… Continue
Added by Ch@n on March 10, 2011 at 9:30am —
The Java Contents
လွန်ခဲ့သော၁နှစ်ခန့်ကထင်သည်။ မြန်မာအိုင်တီပရိုကို စတင်သိရှိခဲ့ပါသည်။ အစကတော့ မသုံးတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာစာကို မမေ့စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ကိုယ်ဖတ်သွားတဲ့ အကြောင်းအရာများကို မြန်မာလိုပြန်ရေးနေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ရေးရင်းနဲ့ ဒီလိုရေးနေတာဟာ အအလွန်အကျိုးရှိမှန်းသိရှိခဲ့ရပါသည်။ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို လေ့လာပြီဆိုကြပါစို့။ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ သိရပြီဆိုလျှင် ပြီးဆုံးအောင်မဖတ်ဖြစ်တော့ပါ။ သုံးရင်သုံးရင်း သုံးပုံသုံးနည်းတွေကို ရင်းနှီးသွားလေ့ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် စာချရေးပြီဆိုပါစို့။… Continue
Added by Min Lwin on March 9, 2011 at 6:00pm —
Java ဟင်း​ပေါင်း​တစ်​ခွက် : Java Class ဖိုင်​ကို Decompiler များ​မှ​ကာ​ကွယ်​ခြင်း
ပြီးခဲ့သော Java ဟင်း​ပေါင်း​တစ်​ခွက် အခန်း​ဆက် ဘ​လောဂ်​များ​တွင် Java Class ဖိုင်​များ​ကို Decompile လုပ်​လို့​ရ​ကြောင်း၊ တ​ဖန် အသုံး​များ​ကြ​သော ဆော့ဖ်​ဝဲ​များ​အကြောင်း နှင့် န​မှု​နာ​အနေ​နဲ့ JAD ကို သုံး​ပြီး လက်တွေ့ Decompile လုပ်​နေ​ပုံ​ကို ဖော်​ပြ​ခဲ့​ပါ​သည်။ ကျွှန်တော်​လေ့​လာ​မိ​သ​လောက်​တော့ Class ဖိုင်​များ​ကို ပြန်​ပြီး Decompile လုပ်​ရာ​တွင် အတိ​အကျ​ကြီး ပြန်​နိုင်​သည်မ​ဟုတ်။… Continue
Added by Min Lwin on March 9, 2011 at 5:00pm —
Simple Burmese OCR
As my graduation project, I am working onasimple Burmese OCR (only alphabets & digits) using ANN. I have already finished the demo program. Here are some screenshots for the curious.
Added by trh on March 8, 2011 at 5:01pm —